Maxay Somaliland Ugu Soo Qulqulayaan Dalal iyo Diblamaasiyiinta Caalamku? – somalilandtoday.com
Maxay Somaliland Ugu Soo Qulqulayaan Dalal iyo Diblamaasiyiinta Caalamku?
(SLT-Hargeysa)-Magaalada Hargeysa ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa aad ugu badnaa socdaalka ay ku tagayaan diblumaasiyiin iyo siyaasiyiin heerkoodu sarreeyo oo ka kala socday dalal iyo hay’ado kala duwan.
Wadahadallada Gavin Williamson, uu la yeeshay madaxda Somaliland ayaa xoogga lagu saaray xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac.
Wafdiga wasiirka oo si diirran loogu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa ayaa wadahallo halkaas kula yeeshay Madaxweyne Muuse iyo xubno ka tirsan goleyaasha xukuumadda iyo baarlamaanka.
Waxaa sidoo kale socdaallo kuwaas lamid ah Hargeysa ku tagay saraakiil kala duwan oo ka socday Midowga Yurub, Qaramada Midoobay iyo Hay’ado kale oo calaami ah, ayadoo ay halkaas booqdeen danjireyaal kala duwan oo caalamka u fadhiya Soomaaliya iyo dawladaha kale ee gobolka.
4-tii April, ayaa waxaa Somaliland tagay danjireyaal matalayey dalalka Denmark, Midowga Yurub, Finland, Norway, Sweden, Switzerland iyo Boqortooyada Ingiriiska kuwaas oo kulamo la qaatay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, Xisbiyada mucaaradka ah, baarlamaanka, guddiga doorashooyinka iyo ururrada bulshada rayidka ah.
Si kastaba ha haatee ismari waaga axsaabta siyaasadda ee Somaliland ee dhanka doorshooyinka ayaa keenay dalal badan iyo hay’ado caalami ah oo daneeya hannaanka dimuquraadiyadda ee Soomaliland in ay tagaan Hargeysa.
Dalal badan oo ay ugu horreeyaan kuwa Midowga Yurub iyo hay’ado caalami ah ayaa dhaqaale badan ku bixiya hannaanka dimuquraadiyadda ee Soomaliland, waana mid kamid ah ujeedooyinka ay diblumaasiyiin fara badan oo kala duwan ay halkaas ugu sii qulqulayaan.
Wadahadallada Somalia iyo Somliland
Dalal badan oo daneeya arrimaha Soomaaliya oo Turkigu uu kamid yahay ayaa isku dayaya in ay qayb ka qaataan wadahaddalada u dhexeeya Dawladda Federaalka ah ee Somalia iyo Somaliland.
Isbaddalka ka dhacay Geeska Afrika
Dhowr jeer oo hore ayaa kulamo kala duwani waxay dhex mareen Madaxda Itoobiya, Ertria iyo Soomaaliya, kuwaas oo kulamadoodaas kasoo saaray qodobo ay kamid yihiin iskaashiga dhinacyada ammaanka iyo dhaqaalaha.